သတင်း - ရေသန့်စင်ရေးဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုနည်း
ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပိုမိုဆိုးရွားလာသောအခါညစ်ညမ်းရေကိုကုသရန်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုဂရုပြုကြသည်။ ရေထုသန့်စင်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများသည်မိလ္လာရေသန့်စင်စက်များအတွက်လိုအပ်သောအရန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဤဓာတုပစ္စည်းများသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရေကုသမှုဓာတုပစ္စည်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုမှုနည်းလမ်းများမိတ်ဆက်ပေး။
I.Polyacrylamide နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း။ (စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့်အစရှိသဖြင့်)
0.1% -0,3% ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ထုတ်ကုန် 1.dilute ။ ရေဖျော်သောအခါရေမပါသောကြားနေရေကိုသုံးလျှင်ပိုကောင်းသည်။ (ဥပမာရေပိုက်ကဲ့သို့)
၂။ မှတ်စု: ကုန်ပစ္စည်းကိုအရည်ပျော်စေသောအချိန်တွင်ပိုက်လိုင်းများအတွင်းစုစည်းခြင်း၊ ငါးမျက်စိအခြေအနေနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အလိုအလျောက်ဆေးထိုးစက်၏စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ကျေးဇူးပြု၍ ထိန်းချုပ်ပါ။
3. နှိုးဆော်သည်မိနစ် ၆၀ ကျော်ဖြစ်သင့်ပြီး 200-400 rolls / min နှင့်အတူဖြစ်သင့်သည်။ ရေအပူချိန်ကို ၂၀-၃၀ as အဖြစ်ထိန်းချုပ်ရန်ပိုကောင်းသည်၊ ၎င်းသည်ဖျက်သိမ်းမှုကိုအရှိန်မြင့်စေသည်။ သို့သော်အပူချိန် ၆၀ below အောက်တွင်သာစစ်ဆေးပါ။
4. ဒီထုတ်ကုန်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သော ph range အားဖြင့်သောက်သုံးသောပမာဏသည် ၀.၁-၁၀ ppm ရှိ၍ ရေအရည်အသွေးနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည်။
၁။ ပန်းချီလုပ်ငန်းတွင်နံနက်ခင်း၌ယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးသုတ်ထားသောအခိုးအငွေ့ A ကိုထည့်ပြီးပုံမှန်ဆေးသုတ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အလုပ်မလုပ်ခင်နာရီဝက်ခန့်ဆေးသုတ်ထားသောအခိုးအငွေ့ B ကိုထည့်ပါ။
၂။ ဆေးသုတ်ထားသောအခိုးအငွေ့ခဲရောစပ်မှု၏အေသွပ်ရည်သည်ရေဖြန့်ဖြူးသည့်အ ၀ င်တွင်ဖြစ်ပြီးအေးဂျင့်ဘီ၏ဆေးပမာဏသည်ရေဖြန့်ဖြူးသည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်။
3. ရေမှုန်ရေမွှားသုတ်ဆေးပမာဏနှင့်ပျံ့နှံ့နေသောရေပမာဏအရ, သုတ်ဆေးမှုန် A နှင့် B ပမာဏကိုအချိန်မီညှိပါ။
၄။ ၇.၅-၈.၅ အကြားဆက်ရှိစေရန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရေ၏ PH တန်ဖိုးကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်မှန်မှန်တိုင်းတာခြင်း၊ ဤအေးဂျင့်သည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်။
၅။ စီးဆင်းနေသောရေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအသုံးပြုသောအခါလျှပ်စီးမှု၊ အက်စ်အက်စ်တန်ဖိုးနှင့်ယာယီစိုင်အခဲပါ ၀ င်မှုသည်တိကျသောတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ထိုအေးဂျင့်အားပျံ့နှံ့စေသောရေတွင်ပျော်ဝင်စေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ရောက်စေသည်။ ဒီအေးဂျင့်၏။ ရေတိုင်ကီကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်နှင့်အသုံးမပြုမီလည်ပတ်နေသောရေကိုအစားထိုးရန်အကြံပြုပါသည်။ ရေပြောင်းလဲမှုအချိန်သည်ဆေးသုတ်ခြင်းအမျိုးအစား၊ ဆေးပမာဏ၊ ရာသီဥတုနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ၏အထူးအခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်းရှိပညာရှင်များ၏အကြံပြုချက်များနှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။